के नियमीत केरा खाँदा छोरा जन्मिन्छ ? जान्नुहोस – Online Nepalaja
के नियमीत केरा खाँदा छोरा जन्मिन्छ ? जान्नुहोस
February 16, 2021 87
कतिपय पुराना भनाइहरुलाई बिज्ञले पनि सत्य सावित गर्दै आएका छन् । हामीले सुन्दै आएका कुराहरु जस्तै ‘खुर्सानी ओसिएमा पानी पर्छ’ । भ्यागुती चलाए छाला चिलाउँछ । गर्भवतीले टन्न केरा खाए छोरो जन्मन्छ । दुध धेरै खाएमा बच्चा गोरो जन्मिन्छ आदि । यी मध्ये केहीमा सत्यता रहेको बिज्ञहरुले समेत प्रमाणित गरेकाछन् ।
उनीहरुको छोरा भएको थियो भने थोरै क्यालोरियुक्त खाना खाने र थोरै केरा खानेको छोरी भएको थियो । अनुसन्धानकर्ताहरु के बिश्वास गर्छन् भने केरामा पोटासियमको मात्र धेरै हुन्छ । जसले लि’ङ्गको लम्बाइ बढाउन मदत गर्छ । तर उनीहरु यो पनि बिश्वास गर्छन् कि केरा खाँदा छोरा हुने सम्भावना केबल ५५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ ।
सम्भावना बढी हुने भएकाले नै हुनसक्छ, केरा खाँदा छोरा जन्मिन्छ भनिएको । त्यस्तै यदी महिला गर्भवती हुँदा छातीमा बढि पोल्छ भने रौं धेरै भएको बच्चा जन्मने कुरा पनि बैज्ञानिक अनुसंधानले पुष्टि गरिसकेको छ । अपडेट खबर बाट ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
Prevछिमेकी महिलासँग सम्बन्ध राख्न बनाए सुरुङ, जब श्रीमानले थाहा पाए…
Nextआमा छोरी कै आँखा यती धेरै आसुँ ! युके बाट आयो सपनालाई यती धेरै सहयोग(भिडियो)